ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီး ဘတ် ၃၀ 7-11 ကူပွန်ရရှိမည်။ ( မြန်မာအသုံးပြုသူများအတွက်သာ) - TrueMoney Transfer
ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီး ဘတ် ၃၀ 7-11 ကူပွန်ရရှိမည်။ ( မြန်မာအသုံးပြုသူများအတွက်သာ)
ဖေဖော်ဝါရီ 14 ရက်၊ 2022 မှ ဧပြီလ 30 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်
ကမ်ပိန်းကို ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ။ :
( မြန်မာအသုံးပြုသူများအတွက် သီးသန့်သာ)
7-11 ကူပွန်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။ :
1. ထရူးမန်းနီး ဝေါလပ်ကိုဝင်ပါ။
2.“ပေါ်လာသည့် 7-Eleven စာမျက်နှာ” ကိုနှိပ်ပြီး ကူပွန်စာမျက်နှာသို့ သွားပါ။
အကယ်၍ မနှိပ်လိုက်ရလျှင်၊ မတ်ဆေ့ချ်ထဲတွင် တွေ့နိုင်ပါမည်။ ကူပွန်အား မတ်ဆေ့ချ်ထဲတွင် ရက် 30 အထိတွေ့နိုင်ပါမည်
3. 7-11 ကူပွန်ကို သုံးရန် ” จ่ายตอนนี้ รับสิทธิ์เลย” ကိုနှိပ်ပါ။
***ချက်ချင်းအသုံးသေးပါက ကူပွန်ကို မနှိပ်ပါနှင့်၊ ကူပွန်သည် 15 မိနစ်အတွင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး ရယူပြီးဖြစ်သည်ဟု အမှတ်အသားပြုပါသည်။***
4. လိမ္မော်ရောင် ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ၊ “ กดชำระเงินที่นี่”
5. ကူပွန်တန်ဖိုး 30 ဘတ်ကို 7-11 ကောင်တာတွင်စကန်ပြပြီးပေးချေနိုင်သည်။ (အနိမ့်ဆုံးပမာဏဝယ်ယူမှုမလိုအပ်ပါ)
**သင်အခုကူပွန်ကိုမနှိပ်ပါက၊ inbox menu တွင်ကူပွန်ကိုသင်ပြန်ရှာပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လော့ဂင်ဝင်ပြီး ရက်ပေါင်း 30 ကြာသည်အထိ ကူပွန်ကို inbox တွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ **
1. “စတင်မည်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
2. မိမိဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပြီး “ရှေ့သို့” ကိုနှိပ်ပါ။
3. ဖုန်းထဲသို့ ဝင်လာသည့် OTP နံပါတ် 6လုံး ကိုထည့်ပါ။
4. “စာရင်းသွင်းမည်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
5. “Foreigner” ကိုရွေးပြီးလျှင် “ပတ်စ်ပို့ Scan လုပ်ခြင်း” ကိုနှိပ်ပါ။
6. ပတ်စ်ပို့ကို စစ်ဆေး၍ ပြထားသည့်အတိုင်း အမှန်ခြစ်များ နှိပ်ပြီးလျှင် “ရှေ့သို့” ကိုနှိပ်ပါ။
7. မျက်မှန်၊ ဦးထုပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းတို့ကို ခတ္တဖယ်ရှားပြီး “ဆယ်ဖီရိုက်ပါ” ဟူသော ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ စကန်လုပ်ပါ။
8. စကန်လုပ်ပြီးလျှင် မျက်တောင်နှစ်ချက်ခပ်လိုက်ပါ။
9. ပုံပါအတိုင်းအချက်အလက်များကို ရွေးချယ်/ဖြည့်သွင်းပါ။ မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်/ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်သောနေရာများကို အနီရောင်ဘောင်ဖြင့်ပြထားသည်
10. လိုအပ်သည့် အချက်များအားလုံးဖြည့်ပြီးလျှင် “ရှေ့သို့” ကိုနှိပ်ပါ
11. မိမိကိုင်ဆောင်ထားသော ဝေါ့ပါမစ်ပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။
12. “မှတ်တမ်းစာရွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ။
13. ဓာတ်ပုံကိုစစ်ဆေးပြီးလျှင် “ဤပုံကို သုံးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။
14. ပို၍သေချာစေရန် ဓာတ်ပုံများထပ်ရိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်“မှတ်တမ်းတင်သွင်းမည်”
ကို နှိပ်ပါ။ (ပန်းရောင်ကတ်ဆိုလျှင် ကတ်၏ နှစ်ဖက်စလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ)
15. ပြီးလျှင် မိမိ အီးမေးလ်အကောင့် (email)နှင့် ပတ်စဝေါ့ကိုထည့်ပြီး “ရှေ့သို့”ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အီးမေးလ်မရှိလျှင် “No email” ကိုနှိပ်ပါ။
16. TrueMoneyဝေါလပ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိရန်
စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။ စာအိတ်ထဲသို့ ရလဒ်အား ပို့ပေးပါမည်။
TrueMoney အကောင့် 1 ခုအတွက် 1 ကြိမ် ကန့်သတ်ချက်။
ကူပွန်ကို ဘတ် 30 ဖြင့် အပြည့်အ၀ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အောက်ပါပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် ကူပွန်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ- အရက်အဖျော်ယမကာများ၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ကတ်များ၊၁နှစ်ခလေးငယ်များအတွက်နို့မှုန့်၊ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ဖက်ရည်၊ သကြားဖြူ ၁ ကီလို၊ ဖုန်းကတ် အမျိုးအစားအားလုံး၊ ငွေဖြည့်စလစ်၊ အွန်လိုင်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ A-Cash ကတ်၊ ဂိမ်းကတ်၊ ဂိမ်းစလစ်၊ ငွေပေးချေမှုစလစ်၊ အင်တာနက်စလစ် အမျိုးအစားအားလုံး၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊တက်ဘလက်၊ဆင်းမ်ကတ်၊ဂြိုလ်တုလက်ခံသည့်ပုံး၊အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊အမှတ်တရပစ္စည်းအုပ်စုထုတ်ကုန်TENTEN/TG/Holen/Kokubu/MorningKiss/Monantia/HerbalAromaAnona၊ဆေးဆိုင်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များအားလုံး၊ငွေဖြည့်ဝန်ဆောင်မှုSmartပိုက်ဆံအိတ်၊တံဆိပ်ခေါင်း၊ကောင်တာဝန်ဆောင်မှုစရိတ်များ၊ပရဟိတထုတ်ကုန်များ၊ ပရီမီယံထုတ်ကုန်များအားလုံး၊ 24-Catalog။
ကူပွန်ကို ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသူထံ SMS မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုချက်လက်ခံရရှိပြီးနောက် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်အတွင်း အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်) ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများသည် ထရူးမန်းနီးဝေါလပ် အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ကူပွန်ကို လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
ကူပွန်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်သည် 31 မေလ 2022 တွင်ဖြစ်သည်။
ဤကမ်ပိန်းသည် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် “ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီး ဘတ် ၃၀ 7-11 ကူပွန်ရရှိမည်။ ( မြန်မာအသုံးပြုသူများအတွက်သာ)” (“ကမ်ပိန်း”) တွင် ပါဝင်သူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာတွင် ပါဝင်သူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူလက်ခံရမည်-
အဆိုပါ ကမ်ပိန်း ကို True Money Company Limited (“ ကုမ္ပဏီ” ) မှ စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ်ပိန်း ကာလ (ဖေဖော်ဝါရီ 14 ရက်၊ 2022 မှ ဧပြီလ 30 ရက် ၊ 2022 နေ့အထိ) ထရူးမန်းနီးဝေါလပ်အား မြန်မာ သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် သီးသန့်အခွင့်အရေးများ ပေးဆောင်ရန် ကမ်ပိန်းကို ထရူးမန်းနီးဝေါလပ်အက်ပလီကေးရှင်းတွင် အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအတိုင်းသာ။
ဤကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ရန်၊ ခံစားခွင့်ရှိသောပါဝင်သူများသည် ကမ်ပိန်း၏နည်းလမ်းများနှင့် ကမ်ပိန်းကာလအတွင်း ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေးလိုက်နာပြီး အပြည့်အဝလိုက်နာရပါမည်။
ဆုများကို ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေ အခြားမည်သူ့မည့်သည့်အရာနှင့်မျှ လဲလှယ်၍မရပါ။
အသုံးပြုသူသည် လိမ်လည်မှုကိစ္စ၊ အမှားအယွင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်မှု၊ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီကြောင်း သက်သေပြသည့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်အသုံးပြုသူသည် ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီပါက၊ ကုမ္ပဏီသည် ကြိုတင်သတိပေးချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဆုလက်ခံရယူခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်ကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ကြိုတင်သတိမထားမိဘဲ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲရန်၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ကမ်ပိန်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ကမ်ပိန်း၏ဆုကြေးငွေကို ကွဲလွဲရန်၊ ပြောင်းလဲရန်နှင့်/သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ကမ်ပိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်ပြီး သဘောတူလက်ခံရမည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက 1240 သို့ခေါ်နိုင်သည်။